Izinga lokushisa eliphakathi komhlaba likhuphukile ngama-1,31 degrees | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Ukuguquka kwesimo sezulu kanye nezenzo zabantu kubangela ukwanda okuseduze kwamazinga okushisa omhlaba jikelele. Isivumelwano saseParis kanye nomphakathi wezesayensi setha njengomkhawulo omkhulu ukugxila kwe-CO2 kumoya we 400 ppm ukuvimbela amazinga okushisa ukuthi angakhuphuki ngaphezulu amadigri amabili.
Namuhla, njengoba kuvezwe nguprofesa we-Ecology nomqondisi woMnyango Wezesayensi Yezemvelo eNyuvesi yaseCastilla-La Mancha, UJose Manuel Moreno, e-13th National Congress of the Environment (CONAMA), izinga lokushisa emhlabeni jikelele selivele lenyukile 1,31 degrees, okuphathelene kakhulu.
Le datha iqinisekisa isibikezelo esithuthukiswe yi-NASA esithi kulo nyaka ukwanda kwamazinga okushisa aphakathi komhlaba kungaba ngaphezu kwezinga elilodwa. Lokhu akumangazi namuhla, njengokufudumala kwembulunga yonke izinga lokushisa elijwayelekile belilokhu landa emashumini eminyaka amuva nje. Njalo eminyakeni eyishumi kuyashisa kunokwedlule.
UMoreno ukugcizelele ukuthi kuyadingeka ukuhlaziya ubudlelwano obulinganayo phakathi kokukhishwa kwegesi ebamba ukushisa okuqoqana emkhathini ngokwanda kwamazinga okushisa omhlaba. Ngale ndlela, uchaze ukuguquguquka kwezenzo ezingaphikisana nemiphumela yokuguquka kwesimo sezulu futhi wazibiza ngokuthi "ziyaphuthuma", ngoba sinesikhathi esincane nesincane sokufinyelela umkhawulo omkhulu ongaphenduki wamadigri amabili.
UMoreno ukholelwa ukuthi yize izinsongo zokuguquguquka kwesimo sezulu zibalulekile, zingalwa ngokubathathela izinyathelo ezifanele. Ukufanekisa impikiswano yakho khumbula ukushisa okwabhekana neFrance ngo-2003 lapho kwafa khona abantu abayizi-6.000, kanti kulokhu okwenzeka eminyakeni emithathu kamuva, ngo-2006 "bangu-2.000 XNUMX kuphela abafa, okukhombisa ukuthi eminye yemiphumela yayo ingancishiswa."
Noma ngabe yimiphi imiphumela yokuguquka kwesimo sezulu, kusobala ukuthi kumele uthathe isinyathelo ngokushesha okukhulu ukunquma ikusasa lezizukulwane zethu.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Ukuguquka kwesimo sezulu » Izinga lokushisa lomhlaba jikelele selikhuphukile ngama-1,31 degrees